म कसरी पूर्वाग्रह रोशनी स्थापना गर्न सक्छु ताकि म अझै पनी उनीहरुलाई अर्को मा सार्न सक्छु - MediaLight पूर्वाग्रह प्रकाश
MediaLight र LX1 बायस लाइट्स ३M VHB (Very High Bond) चिपकने वाला। यो बलियो गोंद हो र हामी अगस्त २०१ in मा मानक ३M चिपकने बाट स्विच फिर्ता गर्यौं, जब हाम्रो MediaLight दायरा नयाँ LG OLED साथै विभिन्न नयाँ सैमसंग डिस्प्ले बाट झर्ने शुरू भयो। साँच्चै शाब्दिक, ग्राहकहरु साँझ मा बत्ती लागू र भुइँमा एक ढेर मा रोशनी पाउन उठ्छन्। हामीले महसुस गर्यौं कि हामी हाम्रो चिपकने वाला अपग्रेड गर्न आवश्यक छ।
VHB संग, यो अब हुदैन (चिपकने वाला टेप यति बलियो छ कि यो दुबई मा बुर्ज खलीफा को लागी विन्डोज र स्टील cladding संलग्न गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ)। जे होस्, यो जस्तै धेरै प्रश्नहरु को लागी नेतृत्व गर्दछ:
"म कसरी मेरो टिभी बाट पूर्वाग्रह रोशनी हटाउन सक्छु?
"म कसरी अस्थायी रूपमा पूर्वाग्रह रोशनी स्थापना गर्न सक्छु?"
"म कसरी अर्को टिभी मा पूर्वाग्रह बत्ती सार्न सक्छु?"
"म कसरी पूर्वाग्रह प्रकाश अवशेष हटाउन सक्छु?"
केहि मानिसहरु लाई चित्र लागू गर्न को लागी चित्रकार को टेप को उपयोग गर्नुहोस्। अरुले बिजुली टेप प्रयोग गर्ने थिए। हामीले महसुस गर्यौं कि हाम्रा पेशेवर प्रयोगकर्ताहरु को एक धेरै gaffer टेप को उपयोग गरी रहेछ, जो, स्वीकार्य रूप मा, घर मा धेरै प्रयोगकर्ताहरु वरिपरि बसेका छैनन्।
लगातार हाम्रो उत्पादन दायरा को विकास को हाम्रो लक्ष्य संगै राखेर, हामी अब कुनै पनि MediaLight वा LX1 खरीद संग gaffer टेप को नि: शुल्क मिनी रोल प्रदान गरीरहेका छन्। तपाइँ सबै गर्न को लागी यो एक आदेश र सामान्य $ 3.50 शुल्क (जो स्ट्यान्डअलोन आदेश को लागी ढुवानी - शुल्क हुलाक को लागत भन्दा कम छ) मा जोडिएको छ माफी छ।
तपाइँको रोशनी संग केहि मुक्त gaffer टेप प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
हामी सोच्छौं कि gaffer टेप घर थियेटर को उपयोग को लागी सुपर उपयोगी छ, चाहे यो पूर्वाग्रह रोशनी लागू गर्न को लागी वा बाहिर को नियन्त्रण केबलहरु लाई नियन्त्रण गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। र पेशेवर प्रयोगकर्ताहरु को लागी, हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो मिनी रोल तपाइँको ब्याकप्याक, क्यामेरा झोला वा ल्यापटप झोला को लागी एकदम सही छ। बिजुली टेप को एक रोल को आकार को बारे मा, यो gaffer टेप को एक विशाल रोल को आसपास lugging भन्दा धेरै सुविधाजनक छ।
अघिल्लो लेखमा MediaLight Amazon.com मा किन बिक्दैन?
अर्को लेखमा मुरिडियो च्यानलमा पूर्वाग्रह प्रकाशको बारेमा कुरा गर्दै